फ्ल्यासब्याकमा बामदेव : जब प्रचण्डले सचिवालयमा ‘भकुण्डो’ छिराए — janadristi
१९ वैशाख २०७७, शुक्रवार १६:०३
१९ वैशाख, काठमाडौं । बुधबार साँझको सचिवालय बैठकमा अप्रत्याशितरुपमा पहिलो बरियताका अध्यक्ष केपी ओलीले आफूले छाड्नुपर्ने हो भने बामदेव गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव राखेपछि प्रचण्डले भने, म बल्ल बुझ्दैछु पार्टीमा बामदेवलाई कसरी भकुण्डो बनाइएको रहेछ भनेर ।
आफूसहितको भैंसेपाटी गठबन्धनले बामदेवलाई राष्ट्रियसभा सदस्य मनोनित गर्ने र संविधान संशोधन गरेर प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खुलाउने प्रस्ताव ल्याउँदा भइसकेको निर्णय समेत कार्यान्वयन गर्न नमानेका ओलीले एकाएक प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव ल्याएपछि प्रचण्डले बामदेवलाई ‘भकुण्डो’सँग तुलना गरेका हुन् ।
तत्कालीन एमाले र हालको नेकपाभित्र प्रचण्डले भनेजस्तै पटक पटक भकुण्डो बनेका बामदेव गौतम यसपट गोलपोष्टमा छिर्लान् त ?
विगत केही दिनयता सांसदका हस्ताक्षरदेखि विभिन्न दौडधूपमा चलेको नेकपाको राजनीतिमा विहीबारयता सन्नाटा छाएको छ । गौतम स्वयंले कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन् ।
प्रचण्ड र माधव नेपाल पक्षले बामदेवलाई ओलीले पुनः भकुण्डो बनाउन रणनीतिक चालबाजी गरेको आरोप लगाइरहेका बेला गौतमले निकटस्थहरुसँग यसपटक ओलीबाट धोका नहुने बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले सचिवालय बैठकअघि बामदेवपत्नी सांसद तुलसा थापालाई बालुवाटारमै बोलाएर भेटेका थिए ।
ओली पक्षका नेताहरुले प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष दुवै पदमा निर्वाचित भएको हुनाले ओलीले छाड्नुपर्ने कारण नरहेको बताउँदै आएका छन् । ईश्वर पोखरेल, बिष्णु पौडेल लगायतका नेताहरु मौन रहेका बेला पृथ्वीसुब्बा गुरुङहरु ओलीले राजीनामा दिन नहुने भनेर मुखर भएका छन् ।
यो भनेको फेरि पनि बामदेवलाई भकुण्डो बनाउने चालबाजी त होइन ? प्रश्न उठेका छन् ।
बामदेवको विगत २५ वर्षको राजनीतिक उचार-चढावलाई मात्र हेर्दा पनि उनी पटक-पटक विभिन्न नेता, गुट र शक्तिको भकुण्डो बन्दै आएका छन् । सोझो तर प्रष्ट स्वभावका गौतमको राजनीतिक जीवनका केही घटनाक्रममा फर्किँदा उनी प्रचण्डले भनेजस्तै भकुण्डो बनेको बुझ्न सकिन्छ ।
यो आलेख पछिल्ला घटनाक्रमको विवरण होइन र अब के हुन्छ भन्ने आँकलन पनि होइन । नेकपा उपाध्यक्ष बामदेव गौतम कसरी विभिन्न कालखण्डमा उपयोग भए ? प्रचण्डले भकुण्डो भनेपछि एकपटक फ्ल्यासब्याकमा मात्र जान खोजिएको हो ।
एमालेको केन्द्रीय कमिटीमा लामो छलफल भयो । र, माधव नेपालविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमा केन्द्रीय कमिटीको बहुमत रहृयो । तर, नेपालले सो निर्णय नै हुन नदिई माइन्युट बोकेर हिँडेपछि केही दिनमा झलनाथ पक्षको बहुमत गुमेको स्मरण नेकपा नेताहरु गर्छन् ।
त्यसयता बामदेव गौतम तत्कालीन एमालेको लडाइँमा सधंै माधव नेपालको विपक्षमा उभिँदै आए ।
त्यही बिन्दूबाट शुरु भएको एमालेको विवाद २०५३ असोजमा महाकाली सन्धी संसदबाट अनुमोदन गर्ने बेला पार्टी विभाजनको तहसम्म पुग्यो । महाकाली सन्धीको विपक्षमा उभिएका गौतमले २०५४ को महाधिवेशनपछि पार्टी फुटाएर नेकपा माले गठन गरे ।
अन्तिममा आफ्नो पक्षका १४ जनालाई केन्द्रीय सदस्य बनाउन माधव नेपाल र केपी ओली पक्षले नमानेपछि गौतमले पार्टी फुटाएका थिए ।
उनी एमालेमा फर्किए पनि सीपी मैनाली, ऋषि कट्टेलहरु फर्किएनन् । एमालेमा फर्किएपछि पनि बामदेवसहित पूर्वमालेहरुलाई तत्कालीन एमालेबाट दोस्रो दर्जाको ब्यवहार कायमै रहेपछि बामदेवले कार्यकर्ताहरुलाई भनेका थिए, अब तपाईहरु माधव नेपाल, केपी ओली, कतातिर लाग्दा राजनीति सुरक्षित हुन्छ, उतै लाग्नुस्, मैले तपाईहरुको संरक्षण गर्न सक्दिनँ ।
त्यसपछि एमालेमा बामदेव पुनः भकुण्डो बनिरहे ।
उनी उपप्रधानमन्त्री भएकै बेला एमालेको आठौं महाधिवेशन भयो । यसपटक बामदेव झलनाथ खनालको भकुण्डो बने ।
सातौं महाधिवेशनमा ओलीलाई साथ दिएका गौतमले आठौं महाधिवेशनमा झलनाथलाई साथ दिएकै कारण खनाल एमालेको अध्यक्ष निर्वाचित भए । खनाल रुक्माङगत कटवाललाई प्रधानसेनापतिबाट हटाउन प्रचण्डसँग सहमति गरेर चीनतिर गए ।
प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारबाट बाहिरिएपछि पनि बामदेवले झलनाथको साथ छाडेनन् । २०७० सालको दोस्रो संविधानसभामा बर्दिया र प्युठान दुवैतिरबाट चुनाव जितेर आएपछि बामदेव पुनः शक्तिशाली भए ।
तर, संसदीय दलको चुनावमा बामदेव पुनः केपी ओलीको भकुण्डो बन्न पुगे ।
पार्टी अध्यक्ष र संसदीय दलको नेता दुवै पदमा जिताउन निणर्ायक भूमिका खेलेका गौतमलाई ओलीले पूर्वसमझदारी अनुसार संसदीय दलको नेता बनाएनन् । त्यसपछि गौतमले पुनः आफू भकुण्डो बनेको महशुस गरे ।
यहीवीच, बर्दियामा चुनाव हारेपछि गौतम रन्थनिए । चुनाव हार्ने विभिन्न कारणमध्ये ओली पक्षको असहयोग र अन्तरघात पनि उनले औंल्याए । यहाँ पनि उनले आफूलाई भकुण्डो बनाइएको महसुस गरे ।
एमाले-माओवादी एकता भएको आगामी जेठ ३ गते दुई वर्ष पुग्दैछ । यो दुई वर्षको बीचमा बामदेव गौतम कहिले ओलीबाट त कहिले प्रचण्डबाट भकुण्डो बनेकै हुन् ।
यसबीचमा बामदेव जता लाग्यो, सचिवालयमा त्यतै बहुमत पुग्ने भएपछि बामदेवले भरपूर फाइदा पनि लिए । विधानमै संशोधन गरेर उपाध्यक्ष बनाइए, संगठन विभागको प्रमुख भए । उनी अझ शक्तिशाली र निणर्ायक बन्दै जाँदा पछिल्लो कालखण्डमा उनी प्रचण्ड-माधव गठबन्धनको भकुण्डो बने ।
बामदेवको भैंसेपाटीस्थित निवास पछिल्लो समय केपी ओलीविरोधी सचिवालय सदस्यहरुको जमघटस्थल बन्यो । संविधान संशोधन गरेर राष्ट्रियभा सदस्यसमेत प्रधानमन्त्री बन्नेदेखि बामदेवलाई राष्ट्रपतिबाट मनोनित गर्नेसम्मका भैंसेपाटी गठबन्धनका प्रस्ताव त्यहीँ तयार भएका थिए । जुन कुरा ओलीले कार्यान्वयन गरेनन् ।
अध्यादेश प्रकरणपछि ‘क्लाइमेक्स’मा पुगेको नेकपाको विवाद ओलीको राजीनामा कि पार्टी विभाजन भन्ने तहमा आइपुग्दा बामदेव पुनः निर्णायक ठाउँमा छन् । र, उनी एकपटक फेरि भकुण्डो बन्ने हुन् कि भन्ने चर्चा नेकपामा छ ।
सचिवालय बैठकमा प्रचण्डले बामदेवलाई भकुण्डो बनाइएको प्रसंग त्यसै ल्याएका होइनन् ।
बुधवार साँझ आएको केपी ओलीको प्रस्तावले बामदेव सतर्क तर उत्साहित भएका छन् । उनले संविधानविददेखि नेकपाका नेता-कार्यकर्तासँग परामर्श थालिसकेका छन् । एक बारको जुनीमा प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर उनी कुनै पनि मूल्यमा छाड्न चाहँदैनन् ।
केही साताअघि गौतमसँग भेट्दा उनले भनेका थिए, ‘तपाई पत्रकारहरु म उपचुनाव लड्ने वा संविधान संशोधन गरेर आउने कुरामा किन बिरोध गर्नुहुन्छ ? म प्रधानमन्त्री भएँ भने यो देशलाई १० वर्षमै चीनको हाराहारीमा पुर्‍याउँछु । पत्रकारहरुको पनि अलग्गै संसद बनाउँछु र तपाईहरु सबै सांसद !’
केही दिनअघि पूर्वमाओवादी खेमाका एक स्थायी कमिटी सदस्य गौतमलाई भेट्न भैंसेपाटी पुगेछन् । उनी पार्टीभित्रका समस्याबारे कुरा गर्न चाहान्थे । तर, करीव डेढ घण्टाको भेटमा गौतमले आफू प्रधानमन्त्री बनेपछि के गर्ने भन्ने योजना र नीति कार्यक्रम मात्र सुनाएर पठाएछन् ।
अब के हुन्छ ? अनुमानमात्र लगाउन सकिन्छ । केपी ओलीले सुविचारित ढंगले बामदेवलाई प्रधानमन्त्री बनाउन खोजेका हुन् कि तत्कालको संकट टार्न बामदेव कार्ड फालेर भैंसेपाटी गठबन्धन भत्काउन खोजेका हुन् ? दुवैखाले आशंका छन् । बामदेवले अहिले नै दुवै पक्षलाई बिच्काउन चाहेका छैनन् ।
बितेका साढे दुई दशकमा बामदेव जसरी प्रयोग भए । वा, भकुण्डो बने, त्यसबीचमा उनले सत्ताको फाइदा पनि राम्रैसँग लिएका छन् । स्थिर नेता नहुनुको फाइदा र बेफाइदा पनि उनले पाएकै छन् । सम्भवतः उनको राजनीतिक जीवनको उत्तरार्धमा भकुण्डो बन्ने कि गोलपोष्टमा छिर्ने भन्ने यो निणर्ायक मोड हुन सक्छ ।
पटक-पटक पार्टीभित्र विभिन्न नेता र गुटहरुबाट प्रयोग हुँदै भकुण्डो बनेका र नेताहरुको विवादमा निणर्ायक बनेर सहायक पदहरु हात पार्दै आएका गौतमको अबको आकांक्षा प्रधानमन्त्री मात्रै हो ।
तर, उनी यसपटक पनि केपी ओलीको भकुण्डो मात्र बन्ने हुन् वा शनिबार बस्ने सचिवालयको बैठकमा उनलाई प्रधानमन्त्री बनाउने गरी प्रस्तावै आउँछ ? अहिले बामदेव आफैं पनि अनुत्तरित छन् ।